Olee otú Play Music si gị Apple Watch enweghị iPhone
Ì nwere ike iji Apple Watch maka Music enweghị Phone
March 24, 2020 site Facetime Guide Nkume a Comment
Olee ihe ị ga-ege ntị na gị họọrọ Music on Apple Watch na ihe ị ga-enwe ike ige ntị na? All ihe na-atụle, na-adabere gị nche nlereanya. Ebe ị ga-niile dị iche iche na ọrụ ị nwere ike ime iji gị Apple Watch enweghị paired na iPhone.
ọ bụla Apple Watch na-agba ọsọ watchOS 4.1 ma ọ bụ elu ga-enyere gị na-ege ntị collections na listi ọkpụkpọ mere gị iPhone. Ị nwere ike dika na-akụ na ngwa dị ka Spotify na iHeartRadio, dị nnọọ ka Apple Music (bụrụ na ị a supporter).
An Apple Watch Series 3 ma ọ bụ Apple Watch Series 4 na-agba ọsọ watchOS 4.1 ma ọ bụ elu nwere ike ime ihe nile n'elu kwuru banyere, ma ọ nwere ike dika njikọ Apple Radio na ihe ọ bụla music i adịkwa elu site iCloud.
Ezie na ndị ọzọ nwere ahụmahụ ụdị nwere ike dị egwu music site piggybacking site na gị iPhone, na Series 3 na 4 nwere ike enuba music legitimately si ígwé ojii. Olee banyere anyị na-a Gander na ndị dị iche iche na-eru nso ka Listen Music on Your Apple Watch.
1 Iji Apple Watch maka Music enweghị iPhone
Iji Apple Watch maka Music enweghị iPhone
Segue gị nche. Press na Digital Crown ka ibiaghachi na Home ihuenyo. Enweta na Music ngwa. Site na mgbe, i nwere ike tụgharịa site thumbnails gị dị iche iche collections na listi ọkpụkpọ. N'akụkụ aka nke ọzọ, enweta na Itie maka Library na tap na ngalaba maka Listi ogwuegwu, artists, albums, ma ọ bụ Songs.
Ị ga-ahụ-enwe ike swipe site assortments gbanwee na gị nche. Enweta na a collection, playlist, omenkà, ma ọ bụ na-akụ na-ịchọrọ ị hear. Ị nwere ike ịchịkwa gị music gị nche site na ịme ọpịpị na Play / kwụsịtụ button, bouncing na-esonụ track, ma ọ bụ hopping aka n'oge gara aga track. I nwere ike dika ịchịkwa olu site mbịne Digital Crown.
Agụ isiokwu a nke na-agụnye zuru ezu ozi banyere Olee otú Iji Apple Watch maka Music enweghị iPhone. Ebe ị ga-niile dị iche iche na ọrụ ị nwere ike ime iji gị Apple Watch enweghị paired na iPhone.
Ị bụ free ịjụ gị gbara ajụjụ metụtara isiokwu a na-eji n'okpuru aha comment igbe. Ma na-eleta anyị website downloadfacetime.com n'ihi na ihe ọmụma bara uru mgbe nile.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Download Facetime Tagged With: Listen Music on Your Apple Watch enweghị iPhone